Iindaba - umgama wokuqala omde wase-China "umngxunya omnye, urhuqa kabini" ulwalathiso lokombiwa lwendlela luphumelele ngempumelelo
Umgama wokuqala wokuqala wase-China "umngxunya omnye, ukurhuqa kabini" ukubhola kwesalathiso kuphumelele ngempumelelo
Nge-11 ka-Agasti, umbhali wafunda kwiNkampani yeLiaohe yoKwakha ioyile yokuQala yeNkampani yezoBunjineli ukuba iQinghe yomgaqo wokugrumba ukuwela ibhidi yesihlanu yeprojekthi yemibhobho yeoyile ekrwada yeDaqing-Jinxi (icandelo leChuiyang-Tieling) elenziwe yile nkampani liphumelele. ukukhula kokuqala kwexesha elide e-China. Uqhekeko olungqalileyo oluhamba ukusuka "kwimngxunya omnye-kabini tsala".
Iprojekthi yokuwela iQinghe imi malunga neekhilomitha ezi-2 kumantla e-Anyemin Village, Idolophu yase-Yemin, kwisiXeko saseKaiyuan, kwiPhondo laseLiaoning. Kungumsebenzi wokwakha ukubhola ngaxeshanye ngombhobho weoyile enobubanzi obungu-813 mm kunye nekheyibhuli enombala onobubanzi obuyi-114.3 mm.Ubume bejoloji yendawo yolwakhiwo ilawulwa ngamatye egrabile kunye nodaka. Icandelo lokuwela lokomba lineemitha ezili-1625 ubude kwaye leliprojekthi enkulu yokuwela umlambo.
Ukuze ugqibezele umsebenzi wokuwela umlambo ngexesha elimiselweyo, ulwakhiwo lweDajin Pipeline Department yeSebe leNombolo 1 yoLwakhiwo loMlambo iLiaohe lucwangciswe ngokwenzululwazi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nobushushu. Unobunzima obuninzi obufana nokuxubana okuphezulu, umlinganiso ongalinganiyo othambileyo kunye nobunzima, kwaye uwugqibe ngempumelelo umsebenzi wokutsala. Kwakungekho nto iqhubayo yodaka emgceni, neyayinconywa kakhulu ngabanini, ukongamela kunye noorhulumente basekhaya.